Mba Otu PC anabatara.
380v, 50hz 30days, 415v / 440v / 460v ma ọ bụ 60hz 50days.
30% TT Ọganihu, nhazi tupu nnyefe ma ọ bụ mkparịta ụka.
18 ọnwa site na nnyefe ụbọchị na BL.
Dabere na ọnụahịa ọnụahịa.
Kedu ka esi ebu njem?
A na-enyefe akụkụ SPL n'akụkụ abụọ (elu & ala), ha abụọ bụ ndị na-ebu ibu, gbakwunye condenser fan na ihe ndi ozo, maka nzukọ ọgbakọ.
Olee otú ime nnyocha ma ọ bụ mmezi iji SPL ngwaahịa?
Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa, zigara Nanqing.wang@lianhetech.com ma ọ bụ kpọọ anyị + 86-21-36160669